China Ngosi & Trade Show factory na suppliers | Donghua
Ngwunye plastik na plastik na-arụ ọrụ agbawaala na ihe omume ahụ. Plastic na-enye azịza dị fechaa ma na-adịgide adịgide nke dị na agba dị iche iche, ike, na textures. Omume ụlọ ọrụ n'anya acrylic n'ihi na ọ nwere ike dabara na ọtụtụ dị iche iche ihe ndozi gburugburu na-adịgide adịgide iji ka na-ele anya mgbe ọtụtụ ihe.
A na-eji ngwaahịa DHUA thermoplastic mpempe akwụkwọ na-eme ihe ngosi na ụlọ ntu.
• Kaadị azụmahịa / broshuọ / akara aka
• Okpokolo agba
Acrylics bụ polymers nke methyl methacrylate (PMMA), nwere ọtụtụ ihe bara uru maka ngosipụta na ngosipụta azụmaahịa ma ọ bụ ngosipụta nzụta. Ha doro anya, dị fechaa, siri ike & na-eguzogide ọgwụ, a na-ahaziri ya, dị mfe ịkpụpụta na ịdị ọcha. Ohere dị na acrylics gafere ngosipụta ngosipụta azụmaahịa. Acrylics bụ nhọrọ a ma ama maka ụlọ ahịa ndị ọzọ dịka mannequins, ngosipụta windo, racks nwere mgbidi ma ọ bụ shelf, ngosipụta countertop na akara ngosi.
Dhua acrylic sheet na-eme ezigbo ntọala maka imepụta ụlọ ahịa na ngosipụta azụmaahịa. Ihe niile site na tebụl na tebụl na ọkọlọtọ na ihe ngosi ngosi nwere ike ịdị site na mpempe akwụkwọ acrylic anyị iji dọta uche ndị ahịa.
Azụmaahịa ● Azụmaahịa / broshuọ / akara aka
Ster Poster osisi
● Mma mgbidi